Sady mijoro ho vavolombelona ny RAy masina eto eto no mitantara ny andram-piainana hitany tany amin’ny ministère rehetra nalehany tany. Raha tany Philippines aho, hoy izy, dia miarahaba sy mikopakopa-tanana ahy ny vahoaka hoe: “Lolo Kiko” izany hoe Dadabe François ny dikany amin’ny fomba fiteny any. Andriamanitra tsy manao an-jorombala na manilikilika na oviana na oviana ireo zokiolona sy be antitra. Miantso antsika hanaraka azy izy eny fa na dia eo amin’ny zaran-taona misy antsika aza satria tsy mitsahatra miantso antsika amin’izay manandrify antsika rehetra Andriamanitra: zaza ianao, misy antso manandrify sahaza ny zaza ; ankizy ianao, dia misy torak’izany ihany koa sahaza ny ankizy; tanora ianao dia mbola toy izany ihany koa, lehibe ianao na antitra dia mbola samy misy antso manandrify iantsoan’Andriamanitra antsika avokoa amin’izany.
Ny maha zokiolona, hoy ny Papa François dia fahasoavana manokana sady iraka ary tena antson’Andriamanitra tokoa. Antso noho izany ny maha zokiolona. Tsy midika akory hoe antitra na lehibe dia hiraviravy tanana, tsy mbola fotoanan’izany, hoy ny Papa François. Zotram-piainana hafa amin’ny fiainana teo aloha mihitsy io. Ao anatin’ityzara-taona ity isika, hoy ihany ny Ray masina no tokony tena hanana ny fahamatorana amin’ny ara-panahy ary fitaratra ho an’ireo zanaka aman-jafintsika rehetra. Manome ohatra ho antsika amin’izany ireo olomasina maro be izay efa nahazo taona kanefa dia tonga soa aman-tsara amin’ny laharan’ny olomasina izy ireo.